कहिले हुन्छ मोबाइलमा कुरा ? – Rara Khabar
कहिले हुन्छ मोबाइलमा कुरा ?
तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन ।
केहि क्षणपछि पुन प्रयास गर्नु होला, धन्यवाद ।
नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्येक कल डायल गर्दा सुन्नुपर्ने टेलिकमको सन्देश हो यो
संचारको अतिआवश्यक माध्यम बनिसकेको मोबाइलमा आवश्यक परेका बेला फोन नलाग्दा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरु मर्कामा परेपछि टेलिकमको कार्यालयमा दैनिक जसो डेलिकेशन जाने गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर र पश्चिम सुर्खेतका विद्यापुर, बाबियाचौर, सालकोटलगायतका गाविसहरुमा मोबाइल सेवा छिन–छिनमा अवरुद्ध हुँदापनि सम्बन्धित निकायले सेवाको गुणस्तर बढाउन चासो नदिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सालकोट गाउँ विकास समितिका सचिव तिलकराम अधिकारीले कुनाथरीदेखि पश्चिमका अधिकांश गाविसमा लामो समयदेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुने गरेको बताए । सोमबार सर्वपक्षिय र सर्वदलिय टोलीसँगै टेलिकमको कार्यालयमा आइपुगेका उनले सालकोटको पलैटेमा टेलिकमको टावर निमार्णको काम तत्काल थाल्न आफूहरुले मागसमेत गरेको बताए । पश्चिमका गाविसहरुमा पर्याप्त टावर नहुँदा मोबाइल सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै सचिव अधिकारीले पलैटेमा टावर निमार्णको काम छिटो शुरु गर्नुपर्ने बताए । पश्चिममा संचारको माध्यमको रुपमा रहेको एक मात्र मोबाइल सेवा पनि बारम्बार अवरुद्ध हुँदा त्यहाँका सेवाग्राही निकै मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकम सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख राजु थापाले भने के कारणले गर्दा फोन सेवामा समस्या आएको हो भनेर अझै पत्ता लगाउन नसकेको बताए । उनले मर्मतको काम भैइरहेकोले कहिलेसम्म फोन सेवा सुचारु हुन्छ भन्नेर यसै भन्न नसकिने समेत उल्लेख गरे । बढ्दो लोडसेडिङ्का कारण ब्याकप नहँुदा सेवामा केही समस्या भएको बताए । पश्चिममा देखिएको नेटवर्कको समस्याका लागि नेपालगञ्जको टेक्निकल टिम आउन लागेको भन्दै प्रमुख थापाले समस्या पत्ता लगाई दुई–तीन दिन भित्रै समस्याको निदान गरिने बताए ।
एडिएसएल सेवा सुस्त
नेपाल टेलिकम सुर्खेतले वितरण गरेको इन्टरनेट सेवा एडिएसएल लामो समयदेखि अत्यन्तै सुस्त गतिमा चल्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा टेलिकमले वितरण गरेको एडिएसएल इन्टरनेटले दिनप्रति दिन सुस्त गतिको नेट सेवा दिँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका हुन् ।
टेलिकमको एडीएसएल इन्टरनेट सेवामा गति अवरोध हुने, फाइल लोड र अपलोड नहुने, बेलाबेलामा सेवा नै अवरुद्ध हुने, अत्याधिक सुस्त गतिमा चल्नेजस्ता समस्या देखिने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले सुस्त गतिको इन्टरनेट सेवालाई छिटो छरितो बनाउन चासो नदिंदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्दै आएका हुन् ।
कार्यालयमा रहेको एडिएसएल नेट महिनौंदेखि सुस्त गतिमा चल्दा कामकाज गर्न समस्या भएको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले एफएमका प्राविधिक प्रमुख बिर्ख बडुवालले बताए । उनले भने,‘ इन्टरनेटको राउटरमा नेटवर्क देखिए पनि कुनै पनि बेवसाइट खोल्दा लामो समयसम्म नखुल्ने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।’ तोकिएको सेवा शुल्क तिरेर पनि महिनौं दिनसम्म इन्टरनेट सेवा सुस्त भईदिंदा उपभोक्ता ठगिने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको लोडसेडिङ र सुस्त गतिको इन्टरनेटले गर्दा अन्य क्षेत्रका उपभोक्ता भन्दा बढि संचारकर्मीहरुले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
वीरेन्द्रनगर र अन्य क्षेत्रमासमेत गरी नेपाल टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट सेवाका ८ सय २४ ग्राहकहरु छन् । टेलिकम सुर्खेतसँग एडिएसएल इन्टरनेटको ८ सय ९६ डाटा लाइन क्षमता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरको पिपिरामा ९६ वटा पोट क्षमता भएपनि हालसम्म १२ वटा मात्रै डाटा लाइन चलेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मितिः १७ असार २०७३, शुक्रबार ०२:१८